April 2020 – Media Sharing
ဒီအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ မိန်မသားတစ်ယောက်ကို ဘယ်တော့မှ လက်မလွှတ်ပါနဲ့….
ဒီအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ မိန်မသားတစ်ယောက်ကို ဘယ်တော့မှ လက်မလွှတ်ပါနဲ့…. လူတိုင်းကတော့ လှတာာမက်တာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ယောက်ျားလေးတွေက လှတာလေးတွေ၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ တကယ်တမ်း လက်တွဲမယ့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ လှနေဖို့လိုအပ်သလားဆိုရင် သူတို့ကတော့ လိုတယ်လို့ပဲ ဖြေမှာပါပဲ …။ လှတာထက် ဒီလိုအင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့ မိန်မသားတစ်ယောက်ကိုတော့ မင်းလက်မလွှတ်သင့်ပါဘူးတဲ့။ သူတို့က တကယ်ပဲ
ချစ်သူကို ကောင်းစေချင်တဲ့ သူတွေတိုင်းမှာရှိတဲ့ အတ္တ ( ၅ ) ခု
ချစ်သူ ကို ကောင်း စေ ချင် တာ ၊ အ ဆင့် မြင့် မြင့် နေ စေ ချင် တာ တ ကယ် ချစ် တဲ့ သူ တိုင်းမှာ ရှိ တဲ့ ဆ န္ဒ တစ် ခု ပါ
တုပ်ကွေးရာသီအစတွင် ဖျားနာချောင်းဆိုးဖြစ်ရုံနှင့် ကိုဗစ်သံသယလူနာအဖြစ် စစ်ဆေးသွားမည်
တုပ်ကွေးရာသီအစတွင် ဖျားနာချောင်းဆိုးဖြစ်ရုံနှင့် ကိုဗစ်သံသယလူနာအဖြစ် စစ်ဆေးသွားမည် ယခုကဲ့သို့ တုပ်ကွေး ရာသီအစတွင် ဖျားနာ၊ ချောင်းဆိုးဖြစ်ရုံနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး စစ်ဆေး မှုများ လုပ်ဆောင်သွားရန် ရှိတယ်လို့ …၊ ကိုဗစ် ရောဂါရှာဖွေရေးတာဝန်ခံ ပါမောက္ခ ဋ္ဌေးဋ္ဌေးတင်(NHL)က ပြောသည်။ တုပ်ကွေးရာသီအစဆိုသည်မှာ မည်သည့် အချိန်ကာလကို ရည်ညွန်းသည်ကိုတော့ ပါမောက္ခ ဋ္ဌေးဋ္ဌေးတင်က
ဖူးစာရှင်ကို အိပ်မက်ထဲမှာ မြင်ဖူးချင်တဲ့ အခါ ဒီနည်းလမ်း သုံးကြည့်ပါ
ဖူးစာရှင်ကို အိပ်မက်ထဲမှာ မြင်ဖူးချင်တဲ့ အခါ ဒီနည်းလမ်း သုံးကြည့်ပါ မိမိရဲ့ဖူးစာရှင်ကို ကြိုတင် တွေ့ဖူးချင်ကြတာ ဟာ လူတိုင်းပါပဲနော် …။ ဒါကြောင့် အိပ်မက်ထဲမှာ ဖူးစာရှင်ကိုတကယ်ပဲ မြင်ရမလားဆိုတာ သိရအောင် ကြားဖူးတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ် …။ ပထမဆုံးဗေဒင်ဆရာအချို့ပြောပြတဲ့နည်း လမ်းလေးကတော့ ဥတစ်လုံးကြက်သွန်ဖြူ သုံးလုံးကို ဆားရေနဲ့ ပြုတ်ပေးရမယ်တဲ့ …။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ပျောက်ဆေးကို တကမ္ဘာလုံး ဖြန့်ချီတော့မယ့် နိုင်ငံ ပေါ်ထွက်လာ…
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ပျောက်ဆေးကို တကမ္ဘာလုံး ဖြန့်ချီတော့မယ့် နိုင်ငံ ပေါ်ထွက်လာ… ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပျောက်ဆေးကို တကမ္ဘာလုံး ဖြန့်ချီတော့မယ့် နိုင်ငံ ပေါ်ထွက်လာပါတယ် …။ ကျွန်းနိုင်ငံ မာဒါဂတ်စကာနိုင်ငံ သမ္မတနိုင်ငံမှ Covid-19 ပိုးနိုင် အောဂင်းနစ် တိုင်းရင်းဆေး ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ် …။ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာ အတွင်းက ကျွန်းနိုင်ငံ
“သင်ညအိပ်ရင် ဘယ်ဘတ်ကို စောင်းအိပ်တက်တဲ့ သူတစ်ယောက် ဆိုရင်တော့ ထီပေါက်တာထက် ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိသွားပါပြီ”
ဘာကြောင့် ဒီလိုမေးရသလဲဆိုတော့ သင်ရဲ့အိပ်စက်ပုံဟာ သင်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် အရမ်းကိုအရေးတကြီး ပတ်သတ်နေလို့ပါပဲ။ အကယ်၍ သင်အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်လေ့မရှိရင်တော့ အခုဖော်ပြသွားမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို အဆုံးထိဖတ်ကြည့်ရင်း ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းအိပ်ဖို့ သင်ကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်ဘက်သို့စောင်းအိပ်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အဆိပ်အတေက်တွေနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ အခြားသောအရာဝထ္တုတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ဖယ်ရှားသွားအောင် ကူညီပေးနိုင်လို့ပါပဲနော် …. ။ ဒီလို ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အညစ်အကြေးတွေသာမက
သင့် လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်မှာ ဘယ်နှစ်ကြောင်းပါလဲ ပြီးရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ
သင့် လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်မှာ ဘယ်နှစ်ကြောင်းပါလဲ ပြီးရင် ဘာတွေဖြစ်တတ်သလဲ လက်ဝါးပြင်က လမ်းကြောင်းတွေ လိုပဲ လက်ကောက်ဝတ်က လမ်းကြောင်းလေးတွေကနေလည်း သင့်ရဲ့ ကံကြမ္မာကို ကောင်းကောင်း သိနိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာ ပညာတတ်စရာမလိုဘဲ အလွယ်တကူနဲ့ လူတိုင်းကြည့်ြ့ပီးတော့ နားလည်နိုင်တဲ့ နည်းလေးကိုသုံးပြီး ကံကြမ္မာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကျွန်တော် တို့တွေ အခုပဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင် …။ ပုံမှန်
ဒီခေတ်မှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ အချစ်ခံရဖို့ဆိုတာ ရှားသွားပြီ…
ဒီခေတ်မှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက် မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ အချစ်ခံရဖို့ဆိုတာ ရှားသွားပြီ… မခူးရက်တဲ့ ပန်းလေးတပွင့်ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ထိုင်ကြည့်နေသလို မြတ်နိုးမှုမျိုးနဲ့ ချစ်ဖို့ဆိုတာ ဟာသတစ်ပုဒ်လိုတောင် ဖြစ်နေပြီ …။ ရည်းစားထားတာ အလှထိုင်ကြည့်ပြီး ဘာလုပ်ရမှာလဲ…ကိုယ်မစားလည်း သူများစားမှာပဲ ဆိုတာတွေက ပါသေးတယ် …။ သူများသုံးပြီးသား ညစ်နွမ်းနေတဲ့ ပုဝါလိုမျိုး အရင်လူနဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တာကို တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းလို တန်ဖိုးထားနေလည်း
မိန်းမအပြင် ပါလာသည့် ခယ်မ(၂)ယောက်လုံးကို ခြေတော်တင်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်
မိန်းမအပြင် ပါလာသည့် ခယ်မ(၂)ယောက်လုံးကို ခြေတော်တင်ခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ် ခယ်မဆိုတာလိုက်ပွဲ ဖြစ်ခဲ့သည့် မုဒိန်းမှု မိန်းမအပြင် ပါလာသည့် ခယ်မ(၂)ယောက်လုံးကို ခြေတော်တင်ခဲ့သည့် မုဒိန်းမှုပါ …။ ဇင်းကျိုက်က ထပ်မံဖြစ်ပွားသော သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု တရားခံအား အကူအညီများဖြင့် ဖမ်းမိပြီ …။ ပေါင် ဧပြီ ၂၈ ပေါင်မြို့နယ် ဇင်းကျိုက်မြို့ ဇင်းကျိုက်ရပ်ကွက် နယ်မြေ
ကံပှငျ့ ကံမွှငျ့စရေနျ ကဆုနျလပွညျ့နေ့ (6.5.2020)တှငျသာပွုလုပျရမယျ့ ယတွာ
နှငျးဆီပနျး(၅)ပှငျ့ သပွပေနျး(၅)ခကျ လမုနျ့(၅)ခုတို့အား လငျဗနျးတဈခပျြထဲတှငျလှပအောငျပွငျဆငျ၍ထညျ့ပွီး ဖယောငျးတိုငျ(၅)တိုငျ |အမှေးတိုငျ(၅)တိုငျ|သောကျတျောရေ(၅)ခှကျစီကိုလညျး ဘုရားရှငျအားဆကျကပျလှူဒါနျးပါ အနန်တော အနန်တ ငါးပါးအား ရညျစူးကပျလှူပူဇျောရငျး အောကျပါအတိုငျး လေးလေးနကျနကျ ဆုတောငျးပေးပါ `ဘုရားရှငျအမှူးရှိသော အနန်တငါးပါးအားရညျမှနျး၍ ရညျစူး၍ နှငျးဆီပနျး (၅)ပှငျ့တိုဖွငျ့လညျးကောငျး| သပွပေနျး(၅)ခကျတို့ဖွငျ့လညျးကောငျး| လမုနျ့(၅)ခုတို့ဖွငျ့လညျးကောငျး| ဖယောငျးတိုငျ(၅)တိုငျတို့ဖွငျ့လညျးကောငျး| အမှေးတိုငျ(၅)တိုငျတို့ဖွငျ့လညျးကောငျး| ရတေျော(၅)ခှကျတို့ဖွငျ့လညျးကောငျး ကပျလှူပူဇျောကနျတော့ပါ၏ ဤသစ်စာမှနျကနျပါက| ဤမှနျသောသစ်စာစကားကွောငျ့လညျးကောငျး| ဤမှနျသောသစ်စာတနျခိုးကွောငျ့သျောလညျးကောငျး|